काठमाडौं : नेपालमा गत २४ घण्टामा ७० जनामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । २५ वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज ७० जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ७ सय १९ पुगेको छ ।
शनिबार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका २, सिरहाका १, सुनसरी र उदयपुरका ४/४ जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा कोरोना संक्रमण घटेकै हो?
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं उपत्यकामा थप १२७ जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोनाको आशंकामा गत २४ घण्टामा ३ हजार ६ सय ४८ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। मुलुकभर हाल २४ हजार ९७ जना क्वारेन्टाइन र ८ हजार २ सय ३९ जना अस्पतालको आइसोलेसमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुस अमेरिकाः परमाणु हतियारको वार्षिक खर्च बराबर ३ लाख आइसियू, ३५ हजार भेन्टिलेटर र ७५ हजार डाक्टरको तलब
ट्याग्स: कोरोना संक्रमण, पीसीआर परीक्षण